१२ अंकले घटेको सेयर बजारमा आजको बजारले फेरि होला करेक्सन? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
१२ अंकले घटेको सेयर बजारमा आजको बजारले फेरि होला करेक्सन?
सेयर बजारमा सोमबार एकाएक लगानीकर्ता हाबि हुँदा सेयर बजार घट्न पुग्यो।
२०७८ बैशाख २१, मंगलवार ०५:२१:००
काठ्माडाैं । वैशाख २१, मंगलवार, फर्किएको सेयर बजारमा सोमबार एकाएक लगानीकर्ता हाबि हुँदा सेयर बजार घट्न पुग्यो। लगानिकर्ता भन्छन् कारोबार रकम सहि हुँदा सम्म बजार बढ्छ। साताको दोस्रो काराबोर सोमबार १२ अंकले घटेको सेयर बजारमा ७ अर्ब माथि रहेको थियो। यसदिन महिला लघुबित,बिशाल बजारले कमाउने लक्ष्य रहेको लगानीकर्ताको दाबि छ भने कारोबार रकम बढि २६सय माथि बिन्दुमा पुग्ने छ।
कारोबार भएको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक १२ दशमलव ३६ अंकले घटेर २ हजार ६ सय दशमलव ७५ विन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ‘क’वर्गको कम्पनी मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स २ दशमलव ६९ अंकले घटेर ४ सय ७५ दशमलव १२ विन्दुमा पुगेको छ । लगानीकर्ताहरुले नाफा बुकमा राख्दा बजार घट्न पुगेको हो। कारोबारमा आएका २ सय १६ कम्पनीको १ करोड ५९ लाख कित्ता –इकाई सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख रुपैंयाको कारोबार भएको छ ।
यस दिन सबैभन्दा धेरै करोबार हुनेमा अपि पावर कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको ३९ करोड ३५ रुपैंयाको कारोबार भएको छ भने दोस्रो कारोबार हुनेमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ। कम्पनको सो दिन २९ करोड ७४लाख रुपैंयाको कारोबार भएको छ। त्यस्तै कारोबार हुनेमा ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । संस्थाको सो दिन २८ करोड ५२ लाख रुपैंयाको कारोबार भएको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका दुईवटा समूहको सूचक मात्र सकारात्मक रहेका छन् भने बाँकि रहेको समूहको सूचक नकारात्मक रहेको छ। सकारात्मक रहने सूचमा माइक्रोफाइनान्स लगानीगत समूह रहेको छन्।
पाँच कम्पनीको नाफा सबैभन्दा उच्च रहेको छ ।यस दिन विशाल बजार कम्पनी, नेशनल फाइक्रो फाइनान्स वित्तिय संस्था,महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था,एनगडि ग्रुप पावर कम्पनी, सिंगटी हाइड्रो इनर्जी कम्पनीका लागानीकर्ताले सबैभन्दा नाफा कमाएका छन् ।
यि कम्पनीले यससबैभन्दा धेरै घट्नेमा हिमालयन उर्जा कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको सो दिन ३ दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ । रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी ३ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेको छ ।